Ngezinye izikhathi uma usebenzisa i-ATM, ungathola ku yisiphi isimo, futhi ngaso sonke isikhathi. Kaningi kuyenzeka ukuthi ATM abadonsi imali kusuka akhawunti, futhi imali kunganikezwa. Futhi nakuba lokhu kungenzeka kunoma ubani, ukuthi baziphathe - akubona bonke uyazi. Uma idivayisi wakwazi ukunyathelisa isheke self-service, kungcono nje kwaba nempumelelo enkulu, futhi ngenxa yalokho kufanele lugcinwe. Le dokhumenti izoba isiqinisekiso sehlakalo.
Ngokuyinhloko Savings Bank akukuniki imali uma kwenzeka ukwehluleka lobuchwepheshe amadivayisi yayo. Ngokwesibonelo, isignali ingakulahlekela nge inkinobho ukuthi unesibopho kokukhipha imali engamaphepha. Lapho inani umonakalo ohlelweni zingase nazo zinikezwe ngokwengxenye. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, qiniseka ukuxhumana ibhange. Ungashayela edeskini usizo noma uxhumane ngqo isisebenzi sasebhange onolwazi olunzulu kule ndaba.
Izizathu lapho ATM akukuniki imali
Kunezizathu ezimbalwa ezenza Savings Bank akukuniki imali. I ezivamile ezifana:
- izizathu inhloso, akukho bhala-offs;
- demagnetize umugqa amakhadi;
- kwakukhona ukuhluleka lobuchwepheshe izimali bhala-off kusuka ekhadini;
Esinye sezizathu kungenzeka ukuthi ATM lungapheli imali, ukungabi khona izikweletu kunesidingo. Kulokhu, ungavele usebenzisa enye idivayisi elikuvumela ukuba enze i operation enjalo.
Esinye isizathu bikho lemali edingekile izenzo ku-akhawunti iklayenti sika. Yiqiniso, i-Savings Bank akukuniki imali namuhla nge-ATM phezu lemali etholakalayo. Ngaphezu kwalokho, idivayisi ngokwayo kanye irisidi ephrintiwe sizobonisa lolu lwazi ngendlela umlayezo. Uma iklayenti ukwazi inani eliqondile kwezimali ekhadini, kodwa noma kunjalo behluleka imali, kulesi simo, kungase ukunikeza ikhomishini zokuqaleka. Ukuze sithole impendulo, kufanele uhlole ngokucophelela izimo yesivumelwano futhi wenze operation eyalandela.
Sberbank futhi kuphele ukunikeza imali ngesikhathi i-ATM, uma kune-akhawunti isivele sowukhokhiswa umkhawulo nsuku zonke. Ezinye izikhungo zezimali, kuhlanganise Savings Bank, kukhona emkhawulweni wosuku ku Ukukhishwa kwezimali, ikakhulukazi ama-credit card. Uma iklayenti hhayi pre-unolwazi ngalo, ungavele ukuya egatsheni yasebhange futhi ukucacisa nemibandela ikhadi.
Uma ikhadi ngokusebezisa ngokuhamba kwesikhathi, akukho okushintshile ukuma, izimisele, noma ufa ke umshini ungase usigwinye noma umane abayamukeli. Esimweni esinjalo, kufanele uthintane yasebhange khiphani ikhadi. Gwema izindawo elivela kuzo Esimweni esinjalo kungenzeka kuphela Isitoreji sekhadi ngokucophelela.
Kodwa, naphezu kwayo yonke le, isimo ezingemnandi neze ukuba ukuhoxisa izimali ezivela akhawunti ngaphandle empeleni enikeziwe.
Ukuthi baziphathe kanjani uma ATM Savings Bank enganikanga imali, kodwa wazikopisha?
Isinyathelo sokuqala ukuba uthole ukuthi imali ezidonswe ku-akhawunti noma nje isheke yakhishwa. Mhlawumbe kunjalo, ukuthi kwakukhona ukuhluleka, futhi lutholakala Ngemva kokuthola lolu lwazi, futhi kusukela akhawunti zimali akabuyisanga. Ukuze ubone lokhu, kubalulekile ukufaka ikhadi emuva emshinini bese uhlole ibhalansi. Uma imali bonke isuswe ke isivele kungenzeka uthathe esinye isinyathelo.
Ngo hlandla zezizathu ezenza Savings Bank akukuniki imali, qiniseka ukugcina isheke he abuyiselwe. Ukuze ubuyele izimali, ezingazange ekhishwe ATM, kumele uhlinzeke ebhange isheke, ipasipoti ikhadi ngawo ikhasimende izama imali. Qiniseka ukubhala isitatimende lapho kubalulekile ukuchaza ngokuningiliziwe lokho okwenzeka. Isibonelo, uma i-ATM aqalwa ekhishwe imali, bese ethumba emuva noma ukukhishwa engalungile isamba ezidingekayo.
Yini enye ongayenza?
Iziqondiso kuya ATM wawuthi, uma Savings Bank enganikanga imali egcwele, kufanele axhumane ngokushesha ne-ebhange futhi bathi zazingekho. Nge efanele futhi ifike ngesikhathi isinyathelo izimali emuva akhawunti ngokushesha okukhulu. Imali kufanele njalo ngokucophelela recalculate ngqo ATM. Inqubo kungathatha isikhathi eside uma izimali ezathathwa ATM yelinye ibhange, njengoba ukusebenza kwenziwa kuzo, ngokulandelana, futhi ibuyisele le mali kubo. Kodwa amakhasimende ayiziphathanga yibhange ukuthi ikhadi yakhishwa.
eside imali emuva kanjani?
Ukubuya eshodayo Kwenziwa isikhathi esithile, kuba cishe amasonto amabili. Uma inani lemali ingenkulu kakhulu futhi imbiza ezibizayo wekhasimende yakhe njalo, khona-ke izobuyiselwa ngokushesha ngemva isheke ukuphepha elihambisana yasebhange - kulesi simo, Sberbank. ATM ungayeki imali ngokuvamile kakhulu, + kangangokuthi bonke zehlakalo kahle ihlolwe futhi kungase kutholakale amaqiniso Ukukhishwa, lapho izimali kakade imali, lemali akunakubangelwa emuva, ngisho noma i-akhawunti akuyona imali eyanele. Esimweni esinjalo, engeyinhle ibalazwe ibhalansi.
Ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama inqubo
Njengoba sishilo, isimo eziyinkimbinkimbi, uma ATM yelinye ibhange yayisetshenziswa. Kulokhu, udaba zizoxazululwa isikhathi eside, ngakho-ke imali emuva kwi-akhawunti maduze. Ngenxa yalesi sizathu, sebenzisa idivaysi yokukhokha ungcono yasebhange Sberbank. ATM ungayeki imali - kwenzeka lapha, kodwa lizobuya ngokushesha okukhulu. Noma kunjalo, akufanele sisebenzise mishini, ngokuvamile kakhulu wehluleka. Uma kungekho okunye, kungenzeka ukuba uthole imali ngokusebenzisa cashier.
Uma ukuthenga wakhipha isheke ke kuyadingeka abonisa ikhodi layo eliyingqayizivele, ngakho musa ulilahle, ngoba Usazoba usizo izinyanga eziyisithupha. Esikhathini kunesehlakalo, lapho Savings Bank enganikanga imali ATM, umbuzo othi "esingakwenza" Kufanele wazi impendulo eyodwa - ukulondoloza isheke.
Ezikabani iphutha, uma ATM enganikanga imali?
Uma ngahlinzwa, kanye nenani alinikwa, kuba ngokuyisisekelo i iwayini ATM, futhi mhlawumbe isizathu iphutha lakhe lobuchwepheshe. Kodwa uma udaba kwezimali nje selikhohliwe ku-ATM, egqoké ngito, kukhona iphutha okulula inattention. Uma ushayele yasebhange lowomuntu kumuntu kumele kudingeke ukuchaza ngokuningiliziwe lokho okwenzeka, njengoba okungezona ayiswe lemali amakhasimende ATM kusho nesimo esihlukile.
Akufanele sibakhohlwe ukuthi udinga ukusisebenzisa lapho ikhadi wakhishwa, ngisho noma lesi sigameko senzeke endaweni ehlukile. Mane ubhale inombolo idivayisi, uqambe ebhange kanye nesikhathi lapho kwenzeka lokhu kuthenga.
Ekuphileni kwethu kukhona ezihlukahlukene ezimweni, ngakho into esemqoka - ningatatazeli. Uma i-ATM Savings Bank enganikanga imali noma ekhishwe, kodwa hhayi ngokuphelele, khona-ke nje udinga ukuxhumana ibhange.
Duglas Kodwa: Filmography, biography kanye nempilo yakho
Inkondlo N. A. Nekrasova "Ngubani Uhlala kahle eRussia": izithombe, kuvetwa kwebalingisi, umthole oyoxoxa emfushane. Ukuze siphile kahle eRussia?
Kuphi e Vologda nengane noma nabangani bakho?